March | 2010 | गणेश कार्कीको ब्लग
Posted on March 28, 2010 by नेपाली मुटु
सन् २००७ मा सिड्नीमा मनाउन सुरु गरिएको यस अर्थ आवर दिवस अभियानलाई गुगल, कोकाकोला, म्याकडोनाल्डलगायत अन्य ठूला र विश्वव्यापी सञ्जाल भएका व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा अत्यन्त धेरै राष्ट्रले समर्थन गरेकाले यस अभियान अत्यन्त सफल भई प्रत्येक वर्ष मनाइँदै आएकामा निरन्तरता दिन यस वर्ष विश्वका प्रख्यात पर्यटन केन्द्रलगायत अन्य महत्त्वपूर्ण स्थलमा बत्ती निभाइ उक्त दिवस मनाइने भएको छ
विश्वका एक सय १५ मुलुकमा अवस्थित ठूला भवन तथा व्यापारिक केन्द्र गरी करोडौँ भवनमा बत्ती निभाउने टि्वटर र फेसबुकजस्ता लोकपि्रय कम्प्युटर प्रोग्रामले आफ्ना नियमित सेवाको सट्टा अँध्यारो पर्दामात्र प्रदर्शन गरी सो अभियानलाई सघाउने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ ।
तर हामी कति सचेत है ? हाम्रो सरकार दिनमा १२ घण्टा loadshedding गरेर संसार भरिका देशहरुलाई दबाब दिईरहेको छ. सरकारको मौसम परिबर्तन सम्बन्धी सचेतना देखेर म पनि छक्क पर्छू . हाम्रो सरकार यत्ति बिघ्न दूरदर्शी छ भनेर कसले सोचेको थियो होला र ? हुन पनि कोपेनहेगन गएको सरकारी लावा लस्कर देखेर मलाई हो की जस्तो त लागेको थियो तर अब चाहि पुरै प्रमाणित भयो. सरकारको यो कदम लाई म हार्दिक स्वागत गर्छु र १२ घण्टा मध्येको कुनै १ घन्टा लाई मेरो तर्फ बाट ब्लाक आउट घोषणा गरिदिन अनुरोध गर्दछु
Posted on March 26, 2010 by नेपाली मुटु
भोली देखि काठमाण्डौको टुडिखेलमा योग प्रशिक्षण दिन आएका रामदेवले काठमाण्डौ टेक्ने बित्तिकै पत्रकार सम्मेलन गरेर आफु नेपाल आएको जनाएका थिए । यसै क्रममा उनले नेपालको सास्कृतिक तथा जैविक सम्पदाको प्रशंसा गर्दै भने, “नेपाल जैविक रुपमा एकदमै सम्भावना बोकेको मुलुक हो । यहाँ पाइने जडिबुटि संसारकै दुर्लभ र उन्नत छन् ।” एक प्रसगंमा उनले भने, “भगवान गौतम बुद्ध नेपाल मै जन्मिएका हुन् । भारतमा बुद्ध जन्मिएको भन्ने प्रचार भारतको कुटिल र घृणित चाल मात्र हो ।” नेपाली राजनितीमा पनि उनको चासो र जानकारी थाहा पाउन सकिन्छ । उनले नेपाली भाषा प्रयोग गरेरै भने, “नेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएको छ । वास्तवमै राजतन्त्र भन्दा लोकतन्त्र धेरै नै राम्रो हो । नेपाली जनताको यो कदमलाई म सम्मान गर्दछु ।” गिरिजा प्रसाद कोइरालाको मृत्युले आफु स्तब्ध भएको भन्न उनले छुटाएनन् ।
भारतले पहिले देखि नै भारतमा बुद्ध जन्मिएको गलत प्रचार गरिरहेको छ । भारतबाट छापिने पत्रपत्रिका हुन् या पुस्तकहरु बुद्ध भारतमा जन्मिएका भनि लेखिएको पाइन्छ । Google ले केहि समय अगाडि बुद्धको जन्म स्थान भारत भनेर देखाएको थियो । एउटा हिन्दी चलचित्रमा बुद्ध भारतमा जन्मिएको भने पछि नेपालमा उठेको बिरोध पछि मात्र त्यस चलचित्रका निर्देशकले माफी मागेका थिए । तर उनले त्यसबेला भनेको कुराले पनि प्रमाणित गर्छ कि भारत सुनियोजित रुपमा नै गलत प्रचार गरिरहेको छ । निर्देशकले भनेका थिए, “प्राविधिक गल्तिको कारण अन्य देश पठाएको प्रिन्ट नेपाल पुगेछ ।”
यसको मतलव नेपाली नागरिकलाई झुक्याएर संसार भरि गौतम बुद्ध भारत जन्मिएको गलत प्रचार गर्न भारत हरतरहले लागिरहेको छ । केहि हद भए पनि भारतको यो दुस्प्रयासलाई रामदेवले रोक्ने प्रयास गरेका छन् ।
पतञ्जली योगपिठले गर्न लागेको योग शिविरमा सहभागि हुन उनी आफ्ना बिशेष सहयोगी आचार्य बालकृष्णसँग आएका हुन् । यो शिविरबाट हजारौं मानिसहरु लाभान्वित हुने कुरा रामदेवले बताएका छन् । उनले भने, “योगबाट जीवन समृद बन्छ ।” आफ्नो लागि नेपाल भ्रमण सँधै प्रिय हुने कुरा बताउँन पनि उनि चुकेनन् । उनको योग शिविर छ दिन सम्म चल्नेछ ।
Posted on March 24, 2010 by नेपाली मुटु
हो, गिरिजा प्रसाद कोइराला को निधनले केहि अफ्ठ्यारो परेको छ तर नेपालको अस्तित्वमै शंका गर्न पछि परेका छैनन नेपाली media हरु. एक जनाको काँधमा मात्र बसेको हुन्न देश. राजा महेंद्र आफु संगै नेपाल सकिन्छ भन्ने सोच्थे रे, अनी लेखेका हुन रे; ” म मरे पनि मेरो देश बांचीरहोस” आज नेपाली media हरु गिरिजाका प्रेमीहरुलाई यही गीत गाउन बाध्य बनाउन खोज्दैछन, गिरिजा मरे पनि उनको देश बाचिरहोस
Posted on March 22, 2010 by नेपाली मुटु
गिरिजाप्रसाद कोइराला अब हाम्रो स्मृतिमा मात्र रहनेछन्। उनको भौतिक शरीर हिजो खरानी भइसकेको छ। परम्परागत हिन्दू मान्यतालाई चुनौति दिँदै उनलाई दागबत्ती दिने काम गरिन उनकी एक मात्र छोरी सुजाता कोइरालाले।
हुनत यसअघि पनि नेपाली समाजमा छोरीले दागबत्ती दिएको र किरिया बसेको धेरै घटना भएका छन्। तर चर्चित व्यक्तिहरुको सार्वजनिक रुपमा हुने कार्यक्रमले पार्ने प्रभाव र यदाकदा हुने र सञ्चारमाध्यममा आउने समाचारले पार्ने प्रभाव फरक हुन्छ। यसअर्थमा छोरीको हातबाट दिइएको दागबत्ती, त्यसको मिडिया कभरेजले मर्ने बेलामा छोरा चाहिन्छ भन्ने परम्परागत हिन्दु मान्यतालाई चुनौति दिन सफल होस्
Posted on March 20, 2010 by नेपाली मुटु
Posted on March 12, 2010 by नेपाली मुटु
इको डोमेन फेसन फाउन्डेसन विजेता गुरुङले त्यतिखेर गरेको टिप्पणीले अहिले स्वरुप पाएको हो। मिसेलले लगाएको यो पोशाक गुरुङको २०१० कलेक्सन हो। न्युयोर्क फेसन सप्ताहमा प्रबलले दिएको अन्तरवार्तामा अमेरिकी महिलाहरुलाई थप आधुनिक देखिनसक्ने बताएका थिए।
‘वधाई छ छ प्रबल। तिम्रो सपना वास्तविक बन्न पुगेको छ,’ फेशनडटकमले गुरुङलाई शुभकामना दिँदै लेखेको छ, ‘तिम्रो डिजाइन के साच्चै श्रीमती ओवामालाई सुहाएको छ ?’
मिसेल युवा डिजाइनहरुको पोशाकमा रुची राख्छिन्। उनले कुनै पनि मुलुकका राष्ट्रप्रमुखसँग भेट गर्दा त्यही मुलुकका युवाले तयार पारेको पोशाक लगाउने गर्छिन्। वाराक ओवामाले अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनाव लड्दा त्यहाँ रहेका आप्रवासीले सघाएका थिए।